Star Wars ဇာတ်လမ်းတွဲထဲက Hoverbike တွေကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ ထုတ်ဖို့ မျှော်မှန်းထား
Myanmar News, Burmese News, ရန်ကုန် သတင်း, ကျန်းမာရေး
အဓမ္မမှုများ / မုဒိမ်းမှုများ
အခြား စီးပွားရေး သတင်းများ
Computer နှင့် အခြား
သရဲ၊ တစ္ဆေ၊ နာနာဘာဝ
ပို့စ်တင်ချိန် - 5/25/2014 07:52:00 PM
ကယ်လီဖိုးနီးယား လေကြောင်းပိုင်းဆိုင်ရာ ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ Aerofex ဟာ နာမည်ကြီး ဇာတ်လမ်းတွဲ Star Wars ထဲက Hoverbike တွေကို စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီယာဉ်တွေကို မောင်းနှင်တတ်ဖို့ အတွက် နှစ်ရက်လောက် သင်ကြားပေးရုံနဲ့ တတ်မြောက်နိုင်တယ်လို့ Aerofex က ဆိုခဲ့ပါတယ်။
Star Wars:Return of the Jedi ဇာတ်ကားကို ကြည့်ပြီး Hoverbike တစ်စီးလောက် လိုချင်စိတ် ပေါ်ခဲ့ဖူးပါသလား။
ဒီ စိတ်ကူးယဉ်သိပ္ပံဇာတ်လမ်းတွဲထဲက လေပေါ်ပြေးယာဉ် Hoverbike တွေကို မကြာတော့တဲ့ ကာလမှာ ရရှိနိုင်ပါတော့မယ်။ ဘီးတွေအစား ကာဗွန်ဖိုင်ဘာအသုံးပြုထားတဲ့ ဒလက်ဝိုင်း တွေ နဲ့ ပြုလုပ်ထားပြီး မော်တော်ဆိုင်ကယ်မောင်းသလောက် လွယ်ကူမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တစ်နာရီ မိုင် ၄၂ မိုင်အထိ မောင်းနှင်နိုင်ပြီး လောလောဆည်တော့ စမ်းသပ်အနေအထားမှာပဲ ရှိပါသေးတယ်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်တုန်းက Aerofex ကော်ပိုရေးရှင်းက အခုလို hoverbike တစ်စီးကို Mojave ကန္တာရထဲက ခန်းခြောက်နေတဲ့ ရေကန်တစ်ကန်အပေါ်မှာ ပျံသန်းပြထားတဲ့ ဗီဒီယိုတစ်ခု လွှင့်တင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ မြေပြင်အထက် ကိုးပေအမြင့်ထိ ပျံသန်းနိုင်ပြီး မော်တော်ဆိုင်ကယ်မောင်းသလိုပဲ ထိန်းချုပ်ရတာပါ။
Aero-X လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ဒီယာဉ်ဟာ တစ်ကြိမ်မှာ ခရီးသည်နှစ်ယောက်ပဲ သယ်ဆောင်နိုင်ပေမယ့် တစ်ကိုယ်ရေသုံးသယ်ယူပို့ ဆောင်ရေးယာဉ်အဖြစ် အနာဂတ်မှာ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုလာကြလိမ့် မယ်လို့ ခန့် မှန်းထားပါတယ်။ ဒီယာဉ်တွေဟာ ဆီတိုင်ကီအပြည့်ဖြည့်ထားရင် ၇၅ မိနစ်လောက်ထိ ပျံသန်းနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Aerofex တည်ထောင်သူ Mark De Roche က “ Aero-X ဟာ စရိတ်သက်သာတဲ့ အော်ပရေးရှင်းတစ်ခုပါ။ ကောင်းမွန်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေလည်း ပေးစွမ်းနိုင်တယ်။ ရှာဖွေရေးနဲ့ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်း အသုံးပြုနိုင်တယ်။ နယ်စပ်တစ်လျှောက် ကင်းလှည့်အုန်းမလား။ ဒါမှမဟုတ် အပန်းဖြေပန်းခြံတွေမှာ ဆော့စရာ အဖြစ်ပါ အသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ်” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သက်ဆိုင်သော အကြောင်းအရာများ ပိုမိုဖတ်ရှုရန် ===> world-news
« ယခင်စာမျက်နှာ Home နောက်စာမျက်နှာ »
မေမြတ်မွန် ဗီဒီယိုများ - Vidoes of May Myat Mon
နာမည်ကြီးရန်အတွက် Sexy photo၊ Sexy pose များ ဆက်ရိုက်သွားမည့် အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦး
အမေဇုံ တောက လူမျိုးစုတို့ ဘဝများ ( အပိုင်း ၂ )
The Global Beauties Website ၏ Miss Grand Slam Popularity 2013 ဆု မြန်မာအလှမယ် ခင်ဝင့်ဝါ ရရှိ၊ ကမ္ဘာ့အလှဆုံး မယ်စာရင်း၌ အဆင့် (၄) နေရာတွင်ရှိ (ရုပ်သံ)
လင်းပိုင်နဲ့ ကာမဆက်ဆံခဲ့သော အမျိုးသမီးက အတွေ့အကြုံများကို ပြန်လည်ဖွင့်ဟ
ဆရာ ဖေမြင့်စာအုပ်တွေ စုစည်းမူ့
CCTV ဖမ်းယူမှုတွင် ထင်ထင်ရှားရှား ပေါ်လာသော အဖွားအို ဝိဉာဉ် (video)
Myanmar River cruise
Wheat Flour in Myanmar
Cheap Hotel in Yangon
Restaurants in Yangon
3-star hotel in Yangon
Painter in Canberra
Vacation in Myanmar
Myanmar Travel Agency
အပစ်ရပ်ရေးကို နောက်အစိုးရနဲ့ ဆွေးနွေးမယ်။
2015 (6)
Nov 04 (5)
Jan 22 ( 1 )
2014 ( 15032 )
September ( 1 )
Sep 15 ( 1 )
August ( 74 )
Aug 13 (5)
Aug 11 (5)
Aug 10 (6)
Aug 08 (6)
Aug 07 (6)
Aug 06 (7)
Aug 05 (5)
Aug 04 (6)
Aug 03 (7)
Aug 02 ( 12 )
Aug 01 (9)
July ( 568 )
Jul 31 ( 12 )
Jul 30 (9)
Jul 29 (9)
Jul 28 ( 11 )
Jul 27 ( 10 )
Jul 26 ( 10 )
Jul 25 ( 17 )
Jul 24 ( 14 )
Jul 23 ( 11 )
Jul 22 ( 12 )
Jul 21 ( 16 )
Jul 20 ( 14 )
Jul 19 ( 15 )
Jul 18 ( 19 )
Jul 17 ( 10 )
Jul 16 (9)
Jul 15 ( 12 )
Jul 14 ( 11 )
Jul 13 ( 21 )
Jul 12 ( 19 )
Jul 11 ( 24 )
Jul 10 ( 13 )
Jul 09 ( 22 )
Jul 08 ( 23 )
Jul 07 ( 26 )
Jul 06 ( 28 )
Jul 05 ( 35 )
Jul 04 ( 26 )
Jul 03 ( 31 )
Jul 02 ( 51 )
Jul 01 ( 28 )
June ( 2020 )
Jun 30 ( 45 )
Jun 29 ( 56 )
Jun 28 ( 41 )
Jun 27 ( 44 )
Jun 26 ( 56 )
Jun 25 ( 49 )
Jun 24 ( 58 )
Jun 23 ( 31 )
Jun 22 ( 47 )
Jun 21 ( 19 )
Jun 20 ( 87 )
Jun 19 ( 61 )
Jun 18 ( 68 )
Jun 17 ( 92 )
Jun 16 ( 101 )
Jun 15 ( 39 )
Jun 14 ( 75 )
Jun 13 ( 87 )
Jun 12 ( 83 )
Jun 11 ( 61 )
Jun 10 ( 85 )
Jun 09 ( 57 )
Jun 08 ( 92 )
Jun 07 ( 86 )
Jun 06 ( 85 )
Jun 05 ( 101 )
Jun 04 ( 86 )
Jun 03 ( 96 )
Jun 02 ( 77 )
Jun 01 ( 55 )
May ( 2703 )
May 31 ( 91 )
May 30 ( 98 )
May 29 ( 72 )
May 28 ( 101 )
May 27 ( 106 )
May 26 ( 70 )
May 25 ( 68 )
ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ် ဦးသိန်းညွန့်မှ လက်ရှိနိုင်ငံေ...
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရှိ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း မုန်တိုင်ြး...
ကချင်ကျေးရွာ ၉၀ကျော်တွင် သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ရန် အ...
တစ်ခုသောလမ်း ဆိ်ုတဲ့ တစ်ကိုယ်တော်အခွေ ထွက်ရှိမယ့် ...
မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းမှ ပါဝင်ပစ္စည်းများကြောင့် အရေပြား ...
လစ်ဗျားအထူးတပ်ဖွဲ့က ပစ်လွှတ်သည့် ဒုံးကျည်ကြောင့် လူ...
မိနစ်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာ စိတ်အပန်းပြေစေမယ့် နည်းလမ်...
တရုတ်ဘက်ကို အမျိုးသမီးတွေ ပို့မယ့် လူမှောင်ခိုဂိုဏ...
Tupac Shakur နောက်ဆုံးပြောသွားတဲ့စကားဟာ ‘F*** you’...
ကမ္ဘာ့မြေနေ့ အထိမ်းအမှတ် နာဆာရဲ့ အကြီးမားဆုံးသော Se...
Android Pattern, Pin, Password, Gesture Lock တွေကိ...
ကယားပြည်နယ် ကျေးရွာတချုိ့တွင် ကျောင်းဆရာများ လိုအပ်နေ
ထိုင်းတောင်ပိုင်းတွင် မွတ်စလင်ခွဲထွက်ရေးသမားတွေ တိ...
မှက္ခရုနာ Thrush (Oral candidiasis)
Motion sickness ခရီးသွားစဉ် ပျို့-အန်ခြင်း
တာဝန်ကျရဲတပ်သားနှစ်ဦးအား ရိုက်နှက်ပြီး ရဲကင်းအဆောက...
ဘင်္ဂလားမြန်မာနယ်စပ်မှာ လုံခြုံရေးအတွက် နယ်ခြားစောင်...
ရန်ကုန်မြို့ အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုကို ရောက်နေပြီ
လက်တော့ တစ်လုံးကို ဘယ်လို သန့်ရှင်းမယ် ?
ရန်ကုန်တွင် ယာဉ်ကြောကျပ်တည်းမှု အဆိုးဆုံး ၇၉ နေရာရှိ
ထိုင်းတောင်ပိုင်းတွင် ရခိုင်အမျိုးသား တစ်ဦး သေနတ်...
ရန်ကုန်တွင် တစ်ရက်တည်း ငါးဦး မိုးကြိုးထိမှန် နှစ်...
Star Wars ဇာတ်လမ်းတွဲထဲက Hoverbike တွေကို ၂၀၁၇ ခုန...
အသက်မပြည့်သေးသည့် အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးကို တပ်သားတစ်...
မျက်နှာသစ်တဲ့အခါ ကုသိုလ် (၅) မျိုးကို ရအောင်ယူနည်း
လူသားနှင့် ချီတာကျားသစ်လေးတို့၏ ထူးထူးခြားခြား သံေ...
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်သို့ ပြောင်းရွှေ့မည် မဟုတ်ကြောင...
ချစ်တယ်လို့ အဖြေပြန်မပေးခင် မိန်းကလေးများ သိထားရမဲ...
တရားခံပြေးလာဖမ်းသည့် ရဲနှစ်ဦးကို ရွာသားများ ၀ိုင်...
သက်ရှိ ဂြိုဟ်သားများကို အနှစ်နှစ်ဆယ် အတွင်း တွေ့ရှ...
ချင်းတောင်ပေါ်တွင် ခရီးသည်တင် မှန်လုံယာဉ်ငယ် ချောက်...
မအောင်မြင်သော ယာဉ်မရပ်ရ လမ်းစနစ် ကန့်သတ်မှုကို ထပ်မ...
ဗဟန်းမြို့နယ်တွင် ဓာတ်ကြိုးပြတ်ကျသဖြင့် နှစ်နှစ်သာ...
ကန့်ဘလူမြို့နယ်တွင် ကျောက်စိမ်း (၄၂) ပိဿာ (၆၀)ကျပ်...
ဦးတေဇရဲ့ မဒွယ်ဖြစ်စဉ်အတွေ့အကြုံနှင့် မလိခမြစ်လယ် ...
မိုဘိုင်းလ် ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ရတနာပုံ အများပိုင်ကုမ္ပ...
ရုရှား လိုလားသော ခွဲထွက်ရေး သမားများ ကျောက်မီးသွေး...
ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် ပစ်ခတ်မှု ၇ ဦးသေ
လီဗာပူးလ်နှင့် မန်စီးတီးတိုက်စစ်မှူးဟောင်း ဘယ်လာမီ...
Supplementary foods ကလေးအတွက် ဖြည့်စွက်စာ
လင်းပိုင်များနှင့်အတူ ဆော့ကစား ပျော်ရွှင်နေခဲ့သည့် ...
ထိုင်းနိုင်ငံရေး ဘယ်ဆီ ဦးတည်နေလဲ
နမ့်ဆန်တွင် ဆိုင်ကယ်ဆီတိုင်ကီ ပေါက်ကွဲရာမှာ သေဆုံး...
ယူနိုက်တက် မန်နေဂျာ မည်သူဖြစ်လာလာ ၎င်းအတွက် ပြဿနာ မရှ...
ခေတ်စနစ်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ဥပဒေတွေ လိုအပ်ကြောင်း သူရဦ...
ထွန်တုံးတိုက်ပွဲဝင် လယ်သမား ၇ ဦးကို ထောင်တစ်လစီ ခ...
ပြည်ပတွင် စင်ပြိုင်အစိုးရတစ်ရပ် ဖွဲ့စည်းရန် ထိုင်း...
Seborrheic Keratosis or Keratosis pilaris ဆားဝက်ခြံ
Acne vulgaris ဆိုးတဲ့ ဝက်ခြံ
Polygamy and Health (1) မယား များများယူရင် (၁)
Polygamy and Health (2) မယား များများယူရင် (၂)
ရေကူးကန်တံတား ပါဝင်သည့် ထူးထူးခြားခြား စင်္ကာပူ အမြွှ...
သွေးအတွင်း ကိုလက်စထရောများခြင်းက သားသမီးရနိုင်ခြေက...
ထိုင်းသို့ပေးအပ်မည့် စစ်ဘက်အကူအညီ ဒေါ်လာ ၃ ဒသမ ၅ သန...
အိမ်ထောင်ကျပြီး အရင်ကထက် ပိုလူကြီးဆန်သွားတယ်လို့ ဖ...
အသက် ၆၀ မှ အသက် ၂၀ သို့ ပြန်လည်နုပျိုလာတော့မည်လော
ရေဆင်းတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားတစ်ဦး မေးမြန်းသည့်် Sky ...
အချိန်ပိုသွင်းဂိုးတွေနဲ့ (၁၀)ကြိမ်မြောက် ချန်ပီယံလ...
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် စစ်အာဏာသိမ်းခြင်းကို ဆန့်ကျင်မှု ...
အောင်မြင်မှု ဆုလဒ်နှင့် ထိုက်တန်သော လူ
May 24 ( 78 )
May 23 ( 77 )
May 22 ( 95 )
May 21 ( 119 )
May 20 ( 73 )
May 19 ( 87 )
May 18 ( 52 )
May 17 ( 92 )
May 16 ( 120 )
May 15 ( 98 )
May 14 ( 105 )
May 13 ( 93 )
May 12 ( 65 )
May 11 ( 82 )
May 10 ( 81 )
May 09 ( 108 )
May 08 ( 87 )
May 07 ( 92 )
May 06 ( 95 )
May 05 ( 81 )
May 04 ( 48 )
May 03 ( 86 )
May 02 ( 93 )
May 01 ( 90 )
April ( 2208 )
Apr 30 ( 83 )
Apr 29 ( 102 )
Apr 28 ( 73 )
Apr 27 ( 52 )
Apr 26 ( 88 )
Apr 25 ( 106 )
Apr 24 ( 109 )
Apr 23 ( 60 )
Apr 22 ( 80 )
Apr 21 ( 86 )
Apr 20 ( 67 )
Apr 19 ( 82 )
Apr 18 ( 88 )
Apr 17 ( 52 )
Apr 16 ( 58 )
Apr 15 ( 35 )
Apr 14 ( 62 )
Apr 13 ( 59 )
Apr 12 ( 65 )
Apr 11 ( 69 )
Apr 10 ( 69 )
Apr 09 ( 86 )
Apr 08 ( 80 )
Apr 07 ( 67 )
Apr 06 ( 60 )
Apr 05 ( 66 )
Apr 04 ( 78 )
Apr 03 ( 57 )
Apr 02 ( 91 )
Apr 01 ( 78 )
March ( 2596 )
Mar 31 ( 88 )
Mar 30 ( 77 )
Mar 29 ( 71 )
Mar 28 ( 77 )
Mar 27 ( 98 )
Mar 26 ( 97 )
Mar 25 ( 72 )
Mar 24 ( 96 )
Mar 23 ( 63 )
Mar 22 ( 73 )
Mar 21 ( 87 )
Mar 20 ( 78 )
Mar 19 ( 86 )
Mar 18 ( 95 )
Mar 17 ( 113 )
Mar 16 ( 84 )
Mar 15 ( 100 )
Mar 14 ( 82 )
Mar 13 ( 128 )
Mar 12 ( 83 )
Mar 11 ( 61 )
Mar 10 ( 75 )
Mar 09 ( 62 )
Mar 08 ( 60 )
Mar 07 ( 95 )
Mar 06 ( 97 )
Mar 05 ( 95 )
Mar 04 ( 76 )
Mar 03 ( 72 )
Mar 02 ( 68 )
Mar 01 ( 87 )
February ( 2205 )
Feb 28 ( 89 )
Feb 27 ( 72 )
Feb 26 ( 104 )
Feb 25 ( 105 )
Feb 24 ( 101 )
Feb 23 ( 71 )
Feb 22 ( 68 )
Feb 21 ( 100 )
Feb 20 ( 130 )
Feb 19 ( 45 )
Feb 18 ( 60 )
Feb 17 ( 111 )
Feb 16 ( 79 )
Feb 15 ( 84 )
Feb 14 ( 81 )
Feb 13 ( 74 )
Feb 12 ( 96 )
Feb 11 ( 55 )
Feb 10 ( 66 )
Feb 09 ( 73 )
Feb 08 ( 78 )
Feb 07 ( 38 )
Feb 06 ( 72 )
Feb 05 ( 72 )
Feb 04 ( 56 )
Feb 03 ( 81 )
Feb 02 ( 79 )
Feb 01 ( 65 )
January ( 2657 )
Jan 31 ( 84 )
Jan 30 ( 68 )
Jan 29 ( 81 )
Jan 28 ( 95 )
Jan 27 ( 105 )
Jan 26 ( 74 )
Jan 25 ( 82 )
Jan 24 ( 69 )
Jan 23 ( 88 )
Jan 22 ( 87 )
Jan 21 ( 68 )
Jan 20 ( 83 )
Jan 19 ( 99 )
Jan 18 ( 82 )
Jan 17 ( 73 )
Jan 16 ( 87 )
Jan 15 ( 70 )
Jan 14 ( 60 )
Jan 13 ( 82 )
Jan 12 ( 90 )
Jan 11 ( 92 )
Jan 10 ( 101 )
Jan 09 ( 88 )
Jan 08 ( 83 )
Jan 07 ( 74 )
Jan 06 ( 117 )
Jan 05 ( 78 )
Jan 04 ( 84 )
Jan 03 ( 105 )
Jan 02 ( 105 )
Jan 01 ( 103 )
2013 ( 8202 )
December ( 2387 )
Dec 31 ( 98 )
Dec 30 ( 80 )
Dec 29 ( 65 )
Dec 28 ( 132 )
Dec 27 ( 127 )
Dec 26 ( 78 )
Dec 25 ( 62 )
Dec 24 ( 85 )
Dec 23 ( 72 )
Dec 22 ( 53 )
Dec 21 ( 79 )
Dec 20 ( 87 )
Dec 19 ( 66 )
Dec 18 ( 73 )
Dec 17 ( 87 )
Dec 16 ( 81 )
Dec 15 ( 60 )
Dec 14 ( 69 )
Dec 13 ( 79 )
Dec 12 ( 93 )
Dec 11 ( 73 )
Dec 10 ( 83 )
Dec 09 ( 87 )
Dec 08 ( 83 )
Dec 07 ( 62 )
Dec 06 ( 67 )
Dec 05 ( 53 )
Dec 04 ( 61 )
Dec 03 ( 81 )
Dec 02 ( 60 )
Dec 01 ( 51 )
November ( 1729 )
Nov 30 ( 34 )
Nov 29 ( 75 )
Nov 28 ( 62 )
Nov 27 ( 51 )
Nov 26 ( 65 )
Nov 25 ( 65 )
Nov 24 ( 64 )
Nov 23 ( 56 )
Nov 22 ( 91 )
Nov 21 ( 70 )
Nov 20 ( 77 )
Nov 19 ( 60 )
Nov 18 ( 85 )
Nov 17 ( 56 )
Nov 16 ( 70 )
Nov 15 ( 1 )
Nov 14 ( 23 )
Nov 13 ( 58 )
Nov 12 ( 92 )
Nov 11 ( 65 )
Nov 10 ( 88 )
Nov 09 ( 21 )
Nov 08 ( 26 )
Nov 07 ( 49 )
Nov 06 ( 55 )
Nov 05 ( 33 )
Nov 04 ( 72 )
Nov 03 ( 59 )
Nov 02 ( 60 )
Nov 01 ( 46 )
October ( 1356 )
Oct 31 ( 64 )
Oct 30 ( 68 )
Oct 29 ( 54 )
Oct 28 ( 78 )
Oct 27 ( 58 )
Oct 26 ( 54 )
Oct 25 ( 65 )
Oct 24 ( 52 )
Oct 23 ( 41 )
Oct 22 ( 35 )
Oct 21 ( 44 )
Oct 20 ( 25 )
Oct 19 ( 35 )
Oct 18 ( 52 )
Oct 17 ( 27 )
Oct 16 ( 47 )
Oct 15 ( 43 )
Oct 14 ( 41 )
Oct 13 ( 27 )
Oct 12 ( 48 )
Oct 11 ( 57 )
Oct 10 ( 37 )
Oct 09 ( 43 )
Oct 08 ( 50 )
Oct 07 ( 29 )
Oct 06 ( 18 )
Oct 05 ( 14 )
Oct 04 ( 33 )
Oct 03 ( 31 )
Oct 02 ( 46 )
Oct 01 ( 40 )
September ( 973 )
Sep 30 ( 34 )
Sep 29 ( 44 )
Sep 28 ( 11 )
Sep 27 ( 40 )
Sep 26 ( 36 )
Sep 25 ( 21 )
Sep 24 ( 42 )
Sep 23 ( 39 )
Sep 22 ( 16 )
Sep 21 ( 24 )
Sep 20 ( 24 )
Sep 19 ( 26 )
Sep 18 ( 43 )
Sep 17 ( 27 )
Sep 16 ( 41 )
Sep 15 ( 37 )
Sep 14 ( 31 )
Sep 13 ( 40 )
Sep 12 ( 50 )
Sep 11 ( 23 )
Sep 10 ( 66 )
Sep 09 ( 36 )
Sep 08 ( 16 )
Sep 07 ( 36 )
Sep 06 ( 39 )
Sep 05 ( 49 )
Sep 04 ( 20 )
Sep 03 ( 27 )
Sep 02 ( 14 )
Sep 01 ( 21 )
August ( 843 )
Aug 31 ( 17 )
Aug 30 ( 20 )
Aug 29 ( 21 )
Aug 28 ( 24 )
Aug 27 ( 24 )
Aug 26 ( 36 )
Aug 25 ( 28 )
Aug 24 ( 18 )
Aug 23 ( 34 )
Aug 22 ( 42 )
Aug 21 ( 27 )
Aug 20 ( 30 )
Aug 19 ( 29 )
Aug 18 ( 16 )
Aug 17 ( 25 )
Aug 16 ( 35 )
Aug 15 ( 28 )
Aug 14 ( 27 )
Aug 13 ( 24 )
Aug 12 ( 35 )
Aug 11 ( 31 )
Aug 10 ( 44 )
Aug 09 ( 22 )
Aug 08 ( 51 )
Aug 07 ( 30 )
Aug 06 ( 26 )
Aug 05 ( 37 )
Aug 02 ( 29 )
Aug 01 ( 33 )
July ( 668 )
Jul 31 ( 32 )
Jul 30 ( 56 )
Jul 29 ( 11 )
Jul 28 (3)
Jul 26 ( 34 )
Jul 25 ( 16 )
Jul 24 ( 21 )
Jul 23 ( 34 )
Jul 22 (7)
Jul 21 ( 33 )
Jul 18 ( 23 )
Jul 17 ( 11 )
Jul 16 ( 38 )
Jul 15 ( 36 )
Jul 14 (5)
Jul 13 ( 1 )
Jul 12 ( 54 )
Jul 10 ( 30 )
Jul 09 (9)
Jul 08 ( 47 )
Jul 07 (2)
Jul 06 ( 15 )
Jul 05 ( 32 )
Jul 04 ( 59 )
Jul 03 ( 10 )
Jul 02 ( 14 )
Jul 01 ( 35 )
June ( 244 )
Jun 30 ( 20 )
Jun 29 ( 14 )
Jun 28 ( 33 )
Jun 27 ( 31 )
Jun 26 ( 19 )
Jun 25 ( 15 )
Jun 24 (9)
Jun 22 (7)
Jun 21 ( 11 )
Jun 20 ( 13 )
Jun 19 (7)
Jun 18 ( 12 )
Jun 16 (3)
Jun 15 (2)
Jun 14 (3)
Jun 13 (6)
Jun 12 (3)
Jun 11 (3)
Jun 10 ( 11 )
Jun 09 ( 10 )
Jun 08 ( 11 )
Jun 04 ( 1 )
January (2)
Jan 01 (2)
နောက်ဆုံးရ သတင်း ၅ ပုဒ်
ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရင် အကျိုးများမယ့် Facebook search
Myanmar Website Tutorials
Google Chrome ရဲ့ လျှို့ဝှက်ဂိမ်း
လူကြည့်အများဆုံး (အစမှ ယခုအထိ)
သစ်ထူးလွင် သတင်း ဆိုရင် ဒီမှာဖတ်ပါ - Thit Htoo Lwin News